ဘယ်လို ဗွီဒီယိုဖိုင် ဖြစ်ပါစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဘယ်လို ဗွီဒီယိုဖိုင် ဖြစ်ပါစေ
Posted by manawphyulay on Jan 25, 2011 in News |6comments
Video format တွေ များလွန်းလို့ ဗွီဒီယိုတစ်ဖိုင် ရလာရင် အဲဒီ ဗွီဒီယိုကို ကြည့်ဖို့ player ရှာရ၊ converter လုပ်ရနဲ့ အလုပ် ရှုပ်တတ်ပါတယ်။ iTinySoft (www.effectmatrix.com/) က ထုတ်လုပ်တဲ့ E.M. Total Video Player 1.31 ကို ဆောင် ထား ရန် သင့်အတွက် ဒီ အခက်အခဲတွေ လျော့ပါးသွားပါလိမ့်မယ်။ Total Video Player သည် အရွယ်အစား 3.66MB သာဖြစ်ပြီး အခမဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို format မျိုးတွေ ဖွင့်နိုင်လဲလို့ မေးရင် ဗွီဒီယို အပိုင်းမှာ format ၂၉ မျိုးနဲ့ audio အပိုင်းမှာ format ၂၀ ဖြစ်ပါတယ်။ Format အသေးစိတ်ကိုတော့ မရေးတော့ပါ။
မြူနှင်းလေးတွေ ဖွေးဖွေးဖြူသော နှင်းမင်းသမီးလေးတစ်ယောက် says:
download လုပ်ပြီး စမ်းသုံးကြည့်ပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ဒါမျိုးဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေအကြောင်းကို ရေးစေချင်ပါတယ်။
K-Lite Codec Pack 6.8.6 << အဲဒါလည်းကောင်းတယ်ဗျ..။ ဖရီးပဲ..။ ၆၄ဘစ်အတွက်လည်းရှိတယ်..။ ကျုပ်သုံးနေတာမို့ပါ။ There is an update pack available that upgrades version 6.8.0 of the codec pack to version 6.8.6. It contains updates for MPC-HC, ffdshow, and x264VFW. It also fixesabug in the Codec Tweak Tool. Download. >> http://codecguide.com/download_kl.htm
ဦးခိုင်ရေ ဘာဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေသုံးသေးလဲ ထပ်မျှဦးလေ……
ခုလိုသိတာလေးတွေ မျှဝေပေးတဲ. မနောကို ကျေးကျေးနော် နောက်ကိုလဲ မျှပါဦးနော်
ကျေးဇူးမနောရေ…………ကျနော်ရဲ့ ကြည့်စရာအကြွေးတွေ ကြေသွားပီ